Maka: obomvu | Martech Zone
I-Psychology kunye ne-ROI yombala
NgoLwesihlanu, ngoJuni 5, 2020 NgoMgqibelo, ngoJuni 6, 2020 Douglas Karr
Ndingu-sucker wombala we-infographic… sele sishicilele indlela abantu besini abayitolika ngayo imibala, umbala, imvakalelo kunye nokufaka uphawu nokuba imibala ayichaphazeli indlela yokuziphatha yokuthenga. Ezi nkcukacha ze-infographic zenzululwazi yezengqondo kunye nembuyekezo kutyalomali inkampani enokuyifumana ngokujolisa kwimibala abayisebenzisayo kumava abo omsebenzisi. Iimvakalelo ezikhutshwe ngombala zisekwe ngakumbi kumava obuqu kunakwinto esixelelwa ukuba bayimele. Umbala obomvu unamandla
NgeCawa, Oktobha 25, 2015 NgeCawa, Oktobha 25, 2015 Douglas Karr
Sibonakalise ezinye zeendlela ezinkulu zendlela imibala yokuchaphazela ngayo indlela yokuziphatha. I-Kissmetrics ikwaphuhlise i-infographic ebonelela ngegalelo ekujoliseni isini esithile. Ndothuswa yumahluko… kwaye iorenji yayijongwa njengexabiso eliphantsi! Ezinye iziphumo kuMbala kunye neBlue Blue ngowona mbala uthandwayo phakathi kwamadoda nabasetyhini. Uhlaza kwenza iimvakalelo zobutsha, ukonwaba, ukufudumala, ubukrelekrele namandla. Amadoda athambekele ekukhanyeni kwimibala eqaqambileyo, ngelixa
NgeCawa, ngoMatshi 25, 2012 Douglas Karr
Sakhe sathumela ngaphambili ukuba imibala inokuchaphazela njani indlela yokuziphatha yokuthenga. Ngokunikwa olo lwazi, kuyathakazelisa ukubona ukuba iilogo ezihlanganisiweyo ziphakamisa njani umbala. Iwebhu igcwele iilogo ezinombala oluhlaza okwesibhakabhaka, zenza imvakalelo yokuthemba kunye nokhuseleko, kunye nobomvu, ukukhulisa amandla kunye nokungxamiseka! Le infographic evela kwi-COLOURlovers ibonisa ukuba uninzi lweyona nto iphumeleleyo kwi-Intanethi inemibala efanayo neelogo zazo!
Imibala iyenza njani impembelelo yokuThenga?
NgoLwesithathu, Septemba 1, 2010 Lwesine, Matshi 18, 2021 Douglas Karr
Inzululwazi yemibala inomdla, ngokoluvo lwam. Abaqulunqi abakhulu- nokuba zezemoto, izinto zokuhombisa amakhaya, abayili bemizobo, okanye abaphuhlisi bojongano lomsebenzisi bayabuqonda ubunzima bemibala kunye nokubaluleka kwazo. Ukusuka kumbala wombala okhethiweyo ukuqinisekisa ukuba ubonelela ngemvisiswano- kwimbala esetyenzisiweyo- inefuthe elibonakalayo kwindlela yokuziphatha komsebenzisi. Umbala unyusa ukwamkelwa kwegama nge-80%, ekhokelela ngokuthe ngqo kukuzithemba kwabathengi. Nantsi indlela imibala echaphazela ngayo iMelika